သရဲနှစ်ကောင် | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » အမှတ်တရ » သရဲနှစ်ကောင်
၂၀၀၉ ၏ သင်္ကြန်နားနီးသော စနေည တစ်ည ။
ပူလိုက်သည်မှာ ဆိုဖွယ်ရာမရှိ. ။ ပြင်ဦးလွင်မို့သာ တော်သေးတော့သည်.။ ငမိုးတို့ အောင်စစ်သည် ဆောင်မှာ ငါးထပ်ဆောင်သစ်ကြီးဖြစ်ပြီး ဖိုင်နယ်ရီးယားများက ၂ ယောက်တစ်ခန်း နေရသည်.။ ပြတင်းပေါက် များဖွင့်ထား၍ လေ၀င်နေသော်လည်း ပူလွန်း၍ စောင်မကပ်နိုင်.။ ငမိုးနှင့် တစ်ခန်းတည်းနေသူက မန်း က ငမိုးဘော်ဒါ ရန်နိုင်ဦး.။ သကောင့်သားကတော့ တရှူးရှူးနှင့် အိပ်နေလေပြီ.။ ငမိုးကတော့ မျက်စိကြောင် သလိုလို ဖြစ်နေ၍ အိပ်၍ မရ.။
ခံတွင်းချဉ်သလို ဖြစ်လာသည်နှင့် လက်က Desk ခုံထဲကို အလိုလိုလက်ရောက်သွားသည်.။ နေ့ခင်းက နှပ်ထားသော “ အတို” လေးများရှိလိုရှိငြား ဟိုဟိုသည်သည် လျှောက်စမ်းကြည့်လိုက်သည်.။
၀မ်းသာအားရအော်လိုက်သော ငမိုးအသံ နည်းနည်းကျယ်သွားသည်.။
“ အာ.. ငမိုး..မင်းကလည်းကွာ. ဘာတွေ့တာတုန်း ..”
တစ်ဖက်ကုတင်မှာ အိပ်နေသော ရန်နိုင်ဦးက ရှုးရှုးရှဲရှဲဖြင့် လန့်နိုးလာသည်.။
“ ဟီး.. ငါယောင်ပြီး အသံထွက်သွားလို့..သားကြီး. အစက ပြန်အိပ်.အစက ပြန်အိပ်..”
“ မင်းကွာ.. များနေပြီ.”
သကောင့်သားက အိပ်ယာက လူးလဲထကာ ဒန်ရေဘူးထဲက ရေကို မော့သောက်နေသည်.။
“ ဟေ.. ၁၂ ခွဲတော့မယ်…”
ငမိုး ဒင်းကိုကြည့်ရင်း ဒင်းမျက်နှာက အရိပ်အယောင်တစ်မျိုးကို ဖမ်းမိလိုက်သည်.။ ထင်သည့်အတိုင်း ပင် ပေါက်ကရအတွေးက ဒင်းပါးစပ်က မဖုံးနိုင်မဖိနိုင် ထွက်ကျလာသည်.။
“ မိုးကြီး ဟရောင်.. မင်းရယ် ငါရယ်.. သရဲလိုက်ခြောက်ရအောင်.. ”
“ ဟဲဟဲ.. လုပ်လိုက်လေ ကြာသလားလို့..”
ဒါမျိုးဆို နှစ်ခါ မခေါ်ရသော ငမိုး၏ အကြည့်က ဟ နေသော သံလော်ကာ ဒုတိယအဆင့်ထဲမှာ ထည့် ထားသော ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ် ရောက်သွားသည်. ။
သံလော်ကာထဲမှာထည့်ထားတာက သင်္ကြန်တွင်း တပ်ဖို့ ပြင်ဦးလွင်ဈေးထဲက ၀ယ်ထားသည့် သရဲပုံ ရာဘာ မျက်နှာဖုံးပျော့ပျော့ကြီး..။
အစွန်ဆုံးအခန်းဖြစ်သည့်. အခန်း(၆)က စကြည့်ကြသည်.။ နှစ်ယောက်စလုံးက မျက်နှာဖုံးကိုယ်စီနှင့် စောင်ကြား ကြီး တွေခြုံလျက်။ ဗယာကြော်ဟု အမည်ပြောင်ခေါ်သည့် ငမိုးနယ်သား ကျော်ဆန်းမျိုး၊နှင့် လူမှန်ကြီးက အပြင် ကိုလှမ်းကြည့်သည်.။
“ ဟေ့ကောင်လူရှုပ်တွေ.။ ငါတို့ အခန်းက တစ်ယောက်မှ ဆေးလိပ်မသောက်ဘူး..”
“ အွန်.. မင်းတို့ကလည်း လူမြင်တာနဲ့ ဆေးလိပ်တောင်းမယ်များ မှတ်နေလားမသိဘူး.။ ဒါနဲ့ ငါတို့ မှန်း ဘယ်လိုလုပ်သိ.တာတုန်း နယ်သားရ..”
ဗယာကြော်က ပါးစပ်ထဲကို လက်ညှိုးထိုးပြသည်။ အံတိုနေပြီ ဆိုသည့်သဘော..။
မခြောက်ရသေး၊ ဈေးဦးမပေါက်သေးသည့် အရောင်းထိုင်း အဲလေ.. အခြောက်ထိုင်း သရဲ နှစ်ကောင် စိတ်ဓါတ်နည်းနည်းကျသွားသည်.။
သို့ပေတည့် ဇွဲမလျှော့ပဲ အဆောင်နောက်ခြမ်းဖက် ဆက်သွားကြသည်.။ အခန်းတိုင်းလိုလို အိပ်နေကြ သည်.။ ကျောင်းဆင်းပွဲ ဓါးကိုင်ဗိုလ်လောင်း စာရင်းတွင် ပါမည့်အရေး ကြိုးစားနေသည့် မင်းမင်းတို့ အခန်းက ၂ ယောက်ကတော့ Table Lamp လေးတွေနဲ့ စာကျက်လို့ကောင်းတုန်း.။ ဒါမျိုးကတော့ ငမိုးတို့က နားလည်မှုရှိပါသည်.။ သူငယ်ချင်းစာကျက် တာကို မနှောက်ယှက်ပါ.။ ဒီတစ်ခန်းမရတော့ နောက်တစ်ခန်းပေါ့.။
ကြည့်ပါဦး.။ ငမိုးတို့ အပတ်စဉ်နှင့်ပေါင်းဆင်းသည့်. ကိုဥာဏ်ကြီး .။ အိပ်နေလိုက်တာ ပုဆိုးကလည်း လည်ပင်းစွပ်လို့.။ အောက်က ဘောင်းဘီပါလို့သာ တော်သေးတော့သည်.။ ဒီလူကြီးကတော့ ခြောက်သည့် သရဲ သာ စိတ်ဓါတ်ကျသွားမည်.။ နိုးမည့်ပုံမပေါ်.။ နောက်တစ်ခန်း…။
ငမိုးတို့ နောက်တစ်ခန်းမရောက်ခင် ကံကောင်းထောက်မ စွာနှင့် ပစ်မှတ်အသစ်ပြောင်းသွားသည်.။ အိမ်သာထဲမှ ရေဆွဲချသံကြားရသည်.။ သေချာပြီ.. ညကြီးသန်းခေါင် အိမ်သာထတက်သည့် သူကတော့ ငမိုးတို့ ပစ်မှတ် ဖြစ်ပေရော့..။
ရန်နိုင်ဦးကို လက်တို့လိုက်တော့ သကောင့်သားက အနေအထားနားလည်သည်.။ ဘေးက ဂျီအီးလမ်း လေးထဲ အရင်ဝင်သွားသည်.။ ငမိုးကနောက်က… ။
ခြေသံနှင့်အတူ. သီချင်းဆိုသည့် အသံဝါကြီးက အရင်ထွက်ပေါ်လာသည်.။
“ မွေးမေကျေးဇူး ဆပ်ဖူးချင်တယ်.. အမေ.. .. မွေးမေကျေးဇူး . ဆပ်ဖူးချင်တယ် အမေ.. ”
ဟား.. နေအောင်…။ ငမိုးဝမ်းသာသွားသည်.။ နေအောင်က တပ်ခွဲမှာ အတော်စလို့ ကောင်းသည့် လူစားမျိုး.။ လူက လူမှန်. ။ ရေတာရှည်သား ။ အသားညှိုညှို ပုပုပြတ်ပြတ်နှင့် စရင်လည်း အတော် စိတ်တို တတ်သည်.။ ငမိုးတို့ ကလည်း အဲဒီလိုလူမှ စချင်တာ..။
“ ဟေ့ရောင်လေး..ဟား.. ဟား..ဟား..”
“ အား..အီး.. ဟာ.. ဟရောင်.. ”
နေအောင်ကြီး လန့်သွားရှာသည်ထင့် .။ ဒူးများပင်ပျော့ခွေ သွားသည်.။
“ ဟာ.. များပီ. သေချင်းဆိုးတွေ.။ တွေ့မယ်.. ထိုးမှာ…”
နေအောင်က နောက်ကလိုက်.။ငမိုးတို့က ရှေ့ကပြေး..။ ထိုသို့ အဆောင်ပေါ်မှာ အုံးအုံးကျက် ကျက် ဖြစ်နေချိန်တွင်.. ပထမထပ်မှာ ပ-နှစ် ကင်းသမား၏ .. ရပ်-ဘယ်သူလဲ ဆိုသည့် ကင်း Challenge သံကို သတိမထားလိုက်မိပါချေ.။
ငမိုးတို့ကလည်း အခန်းထဲထိပြေးသည်.။ နေအောင်ကြီးကလည်း အခန်းထဲထိ လိုက် ထိုးသည်.။ ထိုသို့ တစ်ရုန်းရုန်းဖြစ်နေချိန်တွင်. ရှေ့ခြမ်းနောက်ခြမ်းရှိ ဖိုင်နယ်ရီးယားများကလည်း အကုန်နိုးလာကာ အခန်းထဲမှာ ပြုံ လာကြသည်.။ ရယ်သူက ရယ်.။ ၀င်လုံးသူက ၀င်လုံးနှင့် ပျော်မြူးနေကြခိုက်…။
“ ဗိုလ်ကြီးမျိုးမော်လာပြီ.. ဗိုလ်ကြီးမျိုးမော် လာပြီ..”
ဖိုင်နယ်ရီးယား တစ်ယောက် တပ်လှန့်လိုက်သည် နှင့် အားလုံးငြိမ်ကျသွားသည်.။ တပ်ခွဲမှူး အရာရှိ၏ ရှုးဖိနပ် ခွာသံက ရှေ့ခြမ်းကို ရောက်နေပြီ.။ ခုချိန်ကျမှ ဖိုင်နယ်ရီးယားများက မိမိအခန်းကို ပြန်ပြေးဖို့လည်း မဖြစ် နိုင်တော့ ချေ.။ လောလောဆယ် အခန်းထဲမှာ အယောက် ၂၀ ထက် လျော့မည် မထင်.။
တပ်ခွဲမှူး အရာရှိ ဗိုလ်ကြီးမျိုးမော်က ငမိုးတို့ အခန်းထဲ တန်းတန်းမတ်မတ်ပင်ဝင်လာသည်.။
အင်တိတ်ကိုင်အပွိုင့်မန့်ဗိုလ်လောင်းက အမိန့်ပေးသည်.။ အရာရှိက လက်ပြလိုက်ပြီး…
“ ခုနက ညံနေတာ ဒီအခန်းလားကွ.. ”
ဖိုင်နယ်ရီးယားများ အားလုံးက သံပြိုင်ဖြင့် ..
“ ဟုတ်ပါတယ်..” ဆိုပြီးမှ.. တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ကာ…
“ ဟေ ဘယ်လို လဲကွ. မင်းတို့က ဟုတ်ပါတယ်တွေရော မဟုတ်ပါဘူးတွေရော..၊ ဟရောင် မိုးသက် မင်းပြောစမ်းကွာ..”
ပြဿနာ အရပ်ရပ်တို့၏ မြစ်ဖျားခံရာကို ကြိုတင်သိနှင့်ပြီးသည့် အလား “ ဒါမျိုးတွေငါရိုးနေပြီ ငမိုး” ဆိုသည့် အကြည့်မျိုးဖြင့် ဗိုလ်ကြီးမျိုးမော်က မေးသည်.။
ထိုအချိန်မှာ ငမိုးတို့က လျင်သည်.။ စောင်ကြားနှင့်မျက်နှာဖုံးကို သူမလာခင်ကတည်းက လော်ကာထဲ လုံးထည့်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ရာ စစ်ဆွယ်တာလေးနှင့် အိပ်ရာဝင် ၀တ်စုံဖြင့်..
“ ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်ကြီး ရန်နိုင်ဦး ဗိုက်နာတယ်ဆိုလို့ ဖိုင်နယ်ရီးယားတွေ လာကြည့်နေတာခင်ဗျ.”
“ ဟေ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွ.. ဟေ့ကောင် ရန်နိုင်ဦး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ..”
သကောင့်သားကလည်း သုံးမွှာပူးကို ဗိုက်မခွဲပဲ မွေးထားသည့် မိခင်လို မချိမဆန့်မျက်နှာပေးဖြင့် ပြန်ကြည့်သည်.။ အရာရှိက သူ့ကို ဆက်မမေးတော့ပဲ. ကျန်သည့် ဖိုင်နယ်ရီးယားများဖက်သို့လှည့်၍…
“ ဒီကောင် ဘာဖြစ်တာလဲ..သိလား..”
“ မသိဘူးဗိုလ်ကြီး ညနေက ပီတီချိန်တုန်းက ဒီကောင် နာရီပတ်ထားလို့ ဗိုလ်ကြီး ဂျွမ်းထိုးခိုင်းပြီးက တည်းက အဲ့လိုဖြစ်တာထင်တယ်..”
ငမိုးက ရုပ်တည်ကြီးဖြင့် ၀င်ဖြေသည်.။ ဗိုလ်ကြီးမျိုးမော်က မျက်နှာတည်သွားသည်.။ တကယ်များလား ဆိုသည့် အသိဖြင့် တပည့်အပေါ် စိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားသည့် မျက်နှာပေါ်လာသည်.။ ဆက်မမေးပဲ အခန်းထဲကို လျှောက်ကြည့်နေသည်.။ ဖြစ်ချင်တော့ စာအုပ်စင်ပေါ်က ဆေးကဒ်ကလေးကို သွားတွေ့သည်.။ ကောက်ကိုင် ကြည့်ပြီး …
“ ဒါက ဘာဆေးကဒ်လဲ.”
“ သူဗိုက်နာရင် သောက်တဲ့ဆေးပါဗိုလ်ကြီး.။ တရုတ်ဆေးထင်တယ်.။ တရုတ်စာတွေပါတယ်.”
အရာရှိက မသင်္ကာသာမျက်လုံးများဖြင့် ဆေးပြားခပ်ကြီးကြီး ဖြစ်နေသော အဆိုပါဆေးကဒ်ကို နမ်းကြည့်ပြီးသောအခါတွင်…
“ ဟေ့ကောင် ငမိုး..ဒါက ကလေးစားတဲ့ နို့ပြားကဒ်ကြီးကွ..”
“ အာ.. ဟုတ်ဘူးဗိုလ်ကြီး..မှားသွားလို့.. အဲ့ဆေးကဒ်က ကုန်ပြီထင်တယ်…”
“ အေး နောက်တစ်ခါ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆေးတွေမသောက်နဲ့.. ဆေးခန်းလိုက်.. လိုအပ်ရင် ဆေးရုံတက်..ကြားလား…”
အရာရှိက ပြောပြောဆိုဆို ဟိုလှန်သည်လှန်ရှာနေပြန်သည်.။ ငမိုးစိတ်ထဲက မတွေ့ပါစေနဲ့ မတွေ့ပါစေနဲ့ ဟု အတန်တန် ဆုတောင်းနေသည့်ကြားမှ…
“ ဂလွမ်း.” (သံလော်ကာဖွင့်သံ)
“ ဟာ..ဒါတွေက ဘာတွေတုန်း..”
သွားပြီ.. မျက်နှာဖုံးနှင့် စောင်ကြားတွေတွေ့ကုန်ပြီ.။
“ ဟင်းဟင်း ငါထင်တယ်.. မိုးသက်တို့ ရန်နိုင်ဦးတို့ အခန်းမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုကတည်းက ဒီကိစ္စက ဒီလို ပဲ ဆိုတာ ငါသိတယ်..ကဲ..အခန်းထဲကကောင်တွေ တန်းစီစမ်း..”
တန်းစီပြီးတော့ အရာရှိက ဆက်ပြောသည်.။
“ အေး သင်္ကြန်နားနီးတော့ ကြိုပြောမယ်.။ ငါ့တပ်ခွဲက အက အဖွဲ့ ဆုရအောင်လုပ်ကြားလား.။ ပြီးတော့ သင်္ကြန်ဆိုပြီး ရောင်တော်ပြန်လွှတ်ပြီး ဟိုဟိုသည်သည် သွားမယ်မကြံနဲ့..။ အထူးသဖြင့် ပြင်ဦးလွင်သားတွေ.။ ကြားလား မိုးသက်. မင်းက အဓိက. ပြီးတော့ နောက်..ဒီလို ပေါက်ကရလေးဆယ် ပြဿနာတွေမကြားချင်ဘူး.. ငါနဲ့က အကြောင်းမဟုတ်ဘူး. တပ်ရင်းမှူးသာဆိုရင် မင်းတို့ အရေးယူခံရမယ်. ”
“ နောက်ပြီးတော့ မင်းတို့ First Year လေးတွေကိုလည်း ခေါ်ခေါ် မစကြပါနဲ့. ။ ရောက်ခါစက နင်ဂျာ လုပ်ခိုင်းတာ ဘယ်ကောင်တွေလဲကွ ဟေ..။ မိုးသက် မင်းပဲ မဟုတ်လား..”
“ ဗျာ ဗိုလ်ကြီး.. အာ့ ဟိန်းစစ်နိုင်တို့ပါ.။ ကျွန်တော် မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ..”
သူကလည်း တစ်ဆိတ်ရှိ ဒီငမိုးပဲ လာလာရန်ရှာနေသည်.။
“ အေး ဟုတ်ပြီ… ကျန်တဲ့ဖိုင်နယ်ရီးယားတွေ မနက်ဖြန် မနက်(၈) နာရီ တန်းစီမယ်.။ ၃ နာရီ အထိ Outpass ရမယ်.။ သရဲခြောက်တဲ့ နှစ်ကောင်.။ မင်းတို့ နှစ်ယောက် Outpass မထွက်နဲ့.။ မင်းတို့အင်တိတ် ဘုရားတရားလုပ်တဲ့ကောင်တွေဆီက ပုတီး တစ်ယောက်တစ်ကုံးယူလာခဲ့. ငါနဲ့ ပုတီး စိတ်ရမယ်. ..ကြားလား”
“ ကုတင်ပေါ်က ဗိုက်နာချင်ယောင်ဆောင်တဲ့ကောင်.. မင်းရောပါတယ်…ကြားလား ..”
နောက်ရက်မနက်စောစောတွင် အနော်ရထာစုပေါင်းတန်းကွင်းအတွင်း Outpass Dress ရွှေကြယ်သီး ပြောင်ပြောင် ၊ ရှူးဖိနပ်လက်လက် များကြားတွင် ပုတီး တစ်ယောက်တစ်ကုံးကိုင်ကာ တန်းစီ နေသော ငမိုးနှင့် ရန်နိုင်ဦးတို့ကို စိတ်မသက်သာဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရပါလေသည်.။
(ခြေလျင်တပ်စုမှူးသင်တန်းတွင် ရေးသားခဲ့သော နှင်းခချယ်ရီ လွမ်းပန်းချီ လုံးချင်းဝတ္ထုရှည်မှ)
အခြား ၀တ္ထုတို, အမှတ်တရ
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 7:59 PM
Posted by မိုးသက် at 7:59 PM Read more
Labels: ၀တ္ထုတို, အမှတ်တရ
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) July 7, 2013 at 2:59 AM
အမှတ်တရ လေးတွေ ပေါ့ဗျာ။
Candy July 11, 2013 at 9:06 PM
ငါ့မောင် အရေးအသားက တကယ်ကောင်းတယ်။ အပိုပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ နာ့လိုစာဖတ်ပျင်းတဲ့လူတောင် စိတ်ဝင်စားအောင် ရေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ တော်တော် တော်တာ :D